လိုင်းကားပေါ်မှ ထလရ တို့အကြောင်း..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လိုင်းကားပေါ်မှ ထလရ တို့အကြောင်း..။
လိုင်းကားပေါ်မှ ထလရ တို့အကြောင်း..။
Posted by နေ ဘုန်းလျံ on Nov 17, 2010 in News | 15 comments
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က VOA ရုပ်သံ အစီစဉ်ကိုကြည့်မိတော့ ထလ၇ အကြောင်းတွေရတော့တာဘဲ “တောက် တချက်ထခေါက် တော့ အပေါ့ထ သွားတဲ့ အဖေက ဟေ့ကောင်လေး ဘာတွေယောင်နေတာ လဲ လို့အခန်းအပြင်ဖက်ကနေ အမေးခံရတော့ တယ်..။(ထလရ) ထောက်လှမ်းရေး လို့အဓိပ့ါယ် ရပါတယ် .။ဘာ လဲဒီကောင် တွေလဲယောက်ကျား ကျုပ်တို့လဲယောက်ကျားတွေ အထာပဲ့အောင် ရွဲတယ် လက်လံ လက် လို့ …။အင်း ကျုပ်ရှိနေ တယ် ဆိုရင် အဖြဲခံ၇ပြီမှတ်..။
ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဘဝမှ မခံချင်စရာများ ကို သီပေါမင်းနေပြည်တော် တွင်ရေးပြီပါ ပြီ ဖတ်ချင်ရင် တော့ရှာဖွေ လိုက်ပါ .။လူဦးရေနဲ့ မမျှတဲ့ ရွှေမြို့တော်ကြီးရဲ့ မထသတွေ ပါရမီတွေ သန်မြန်သူတွေ ဘလာ… ဘလာ… ပေါ့..။ကား တွေ လိုင်းလားတွေပေါ်က ထောက်လှမ်းရေး အောက် တန်းစား ၊ကလေ ကခြေ ၊အုတ်ကြားမြက်ပေါက် သံလမ်းခေါင်းအုံး၊မသာအိမ် ဖိနပ်ခိုး၊လမ်းဘေးအီးပါတဲ့ ကောင်တွေ အကြောင်းပေ့ါ..။ အပျိုမလေးတယောက်ကို အင်တာဗြူး ထားတာက ..ဒီလို….. သမီးတို့ ကားစီးတဲ့ အခါမှာလူကလည်းကျပ်ရတဲ့ အထဲ မသမာ နှမသားခြင်းမစာတဲ့ လူတွေကြောင့် အရှက် ရပြီး မခံသိမခံသာဖြစ်စိတ်တိုရပါတယ်သူတို့တွေဟာ ကားကျပ်နေတဲ့အခါ အနားတိုးပြီး နောက် ကနေမဖွယ် မရလုပ်ကြတော့တာဘဲ ဒေါသကလည်းထွက် အဲဒီအချိန်မှာ အပ်တိုချိပ် တို့ရှိရင်ဆောင့်ဆောင့်ပြီး ထိုးလိုက်ခြင်ပါတယ်တဲ့..။ဆက်ပြီး VOA ကမေးတော့ သမီးတို့ ကမြန် မာ မိန်း ခလေးတွေဆိုတော့ ရှက် ကရှက် ဒေါသကထွက်ပေမဲ့ လူကြားထဲမှာ အထင်သေးခံရမှာရယ် ရှက်လို့ရယ်ပါတာပေါ့နော်..။နောက်ထပ်ဖြေထားထာက ဘယ်လိုကာကွယ် ကြသလဲ မေးတော့ အဲဒီလိုအလုပ်ခံရတဲ့ ခြေနေမျိုးတွေရင် အမဒီနားလာနေအဲဒီးမှာပြသနာရှိတယ် ဆိုလိုက်ရင် ထလရတွေနောက်ဆုတ်သွားစေပါတယ်..ဟုတ်ကဲ့ အမရဲတိုင် တော့လဲ ဘာမှမလုပ်ပေးပါဘူး ..နောက်ပြီး ဒီလူတွေကိုခေါ်တာ ထောက်လှမ်းရေးလို့ခေါ်ပါတယ်…။
ကဲဘယ်မှာလဲအမျိုးသမီးရေးရာ၊ဘယ်မှာလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အိုကေ ဥပမာများ အဲဒီလုပ်တဲ့အတိုင်း သူတို့ရဲ့ အမေ၊နှမတွေသာ ခံရမယ်ဆိုရင်……..“@##@@@####^%#@##$ နောက်ပြီး ဒီလိုလူယုတ်မာတွေပိုများလာကြောင်း သတင်းမှာပါရှိပါတယ်…..။အမေရိကန်နေ သူကိုကို တို့ရေ မြန်မာအမျိုးသမီးများလုံခြုံရေး အတွက် ငရုပ် ကောင်း စပရေး အခုရေ ၅သောင်း ကို မြန်မာပြည့်သို့ထောက်ပံ့စေလို ပါကြောင်း မီဂါမီ လျှံကို အကျိုးမျှော်ပြီးမောင်းခပ် လိုက်ပါတယ် သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ရေ ဒူ ဟူ….ဟူ..ဟူ……။
ကိုဖုန်းရေ စာနဲ့ တင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ဘယ်လိုများဆက်စပ်သလဲ
ဝေးပါ့ အန်တယ်ဂျီးရယ်၊ အပ်တိုနဲ့ အထိုးခံရလို့ လဲသွားတာနေမှာပေါ့။
ဟီး ……။ဘတ်စ ကားပုံရှာပါတယ် ကားနဲ့ ပက်သက်နေ လို့ မူပိုင် ခွင့်ကိုလေး စားသောအားဖြင့်သူတပါးဆီ မှ မယူဘဲ ဘုန်းကြီးတပါးဆီက အလှုငွေဘတ် ၁၅၀၀ ထည့်ပြီး ပြန်စွန့်ထားတာပါ ခင်ဗျ..မြန်မာပြည်နယ်စပ်မှာပြောင်းဖူး ကား ၂၀၀၉ ခုနှစ်က မှေက်ထားတာပါ ဒရိုင်ဘာတော့ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး…။အဘရေ ကိုကြောင် ပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ခင်ဗျာ…။
အတွင်းအားကောင်းတာ အပ်စွမ်းတာတက် ကားကြီးကအရှိန်နဲ့ ဝင်တိုးလို့ဗျ၊
သူတို့သုံးယောက်ပြောနေမှပဲ မတင်မကျလေးရေးထားတာက ဇာတ်လမ်းပီပြင်ပါတော့လား ။
ထလရတွေကလည်း နပ်ပါတယ် ကျမတို့လိုလက်ရဲဇာတ်ရဲ စွာတေးတွေအနားကိုမလာပါဘူး ။ ရှက်သလိုလို ၊ နုံသလိုလို ၊အေးသလိုလို အမျိုးသမီးတွေနားပဲ ရွေးကပ်တာပါ ။ ကျမကတော့ ကားစီးရင် လူကြပ်နေစေဦးတော့ သုံးရာ့ခြောက်ဆယ် ဒီဂရီပတ်လည်ရမ်းပြီး ဘေးကလူတွေကိုရန်ုလုပ်တယ် (ထလရစိတ်ချရအောင်ပါ) ကျမတော့အားမနာပါဘူး လူကြားထဲမှာဒါမျိုးအသားလာယူလို့ကတော့ ထအော်ရမှလည်းဝန်မလေးဘူး ကောင်မလေးတစ်ယောက်သာ တစ်ခုခုအော်ကြည့် ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းဖို့ဝန်မလေးဘူး ။ တစ်ခါတစ်လေ နည်းနည်းလေကားကြပ်လို့အနားလာပြီးကပ်လာရင်တောင် အသံတိတ်နည်းနဲ့ ဖြေထောက်ကိုနင်းပြီးဖိနပ်နဲ့ကျိတ်ပစ်တာတို့ ၊ တတောင်နဲ့ထိုးတာတို့လုပ်တတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကို မဟုတ်မမှန်တာ လုပ်တာ ကြံစည်တာမျိုးတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေငြိမ်မခံသင့်ပါဘူး ။ ရှက်စရာ၊ကြောက်စရာမလိုပါဘူး ။ အတိုအပြတ်တွေမလုံတလုံတွေဝတ်ပြီး ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိပေမဲ့ ဒါမျိုးဆိုရင် ရှက်တတ်ကြ၊ ကြောက်တတ်ကြလို့ နေရာမှန် ရှက်တတ်ကြောက်တတ်ရန်လိုပါတယ် ။
ဆူး လည်း အရင်တုန်းက ဆို ကျူရှင်တွေ နေ့တိုင်းသွားတက်နေရတာ.. ဘစ်ကားဘဲ အားကိုးနေရတာ.. ဒေါက်ပါတဲ့ ဖိနပ်စီးတယ်။ သိတယ်မလား.. ဒေါက်နဲ့ ကြိတ်လိုက်တာဘဲ.. ဆန္ဒနဲ့ နာကျင်မှု ထပ်တူ ကျသွားတော့.. လစ်သွားတာပေါ့.. ဒေါက်ဆိုတာလည်း တကိုယ်လုံး ရှိတဲ့ အလေးချိန်ကို ဒေါက်ဆိုတဲ့ အရာလေး သေးသေးလေးမှာ စုထားတာဆိုတော့.. ပေါ့သေးသေးတော့ မဟုတ်ဘူး.. တချက်ဆို တချက်..
ဆူးရဲ့ တစ်ကုယ်လုံးရှိတဲ့ အလေးချိန်ဆိုတာက ဘယ်လောက်လဲဟင်???
ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ ….
အင်း..အဲဒါ တကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြသနာလို့ ထင်တာပါပဲ..။
ဂျပန်မှာ ရဲမေတွေက .. တမင်တကာကို စကပ်တိုတိုဝတ်ပြိး ..ထလရကိုထောင်ဖမ်းတာမျိုးလုပ်တယ်..။
မိရင် .. တီဗီ၊သတင်းစာထဲထည့်တာမို့ .. လုပ်တာတော်တော်နည်းသွားတယ်လို့ပြောတာပဲ..။
မြန်မာပြည်မှာလည်း.. ထောင်ဖမ်းတာ. လုပ်သင့်တယ်..။
မြန်မာပြည်က ရဲမေတွေ ၀တ်ဖို့ ဦးလေးခိုင် အ၀တ်အစား စပွန်စာ ပေးလိုက်ပါလား..
ကွန့်မန့်တွေ ဖတ်ပြီးကော့တခု စဉ်းစားမိတယ် ဒါကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဒေါ်ကြီး အိတုံ၊တို့ဒေါ်ဒ်ါဆူးတို့က နီးစပ်ရာကောင် မလေးတွေ မကြောက် ဖို့ တန်ပြန် တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောပြစေချင်တယ်ဖတ်ရတဲ့ မ်ိန်း ကလေးအားလုံးလဲဆိုလိုပါတယ်.မြန်မာပြည်က လူတွေက ပုဆိုးနဲ့ဆိုတော့ အီးးးးးးးးး။
တုံမမ ဆူးမမ ဟယ်လိုမမ တို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီး
်ပေါင်းပြီး “ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ”‘ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်ကို ထုတ်သင့်ပါတယ်။
ကျနော့် အနားက ကလေးများနဲ့ တိုင်ပင်တဲ့အခါ ဒီရန်ကိုဝေးဘို့အတွက်အလွယ်ဆုံးသောနည်းလမ်းကျတော့
လေးပေါက်တို့ မန်းကလူတွေကတော့ ဟုတ်တာပေါ.. အိမ်တိုင်းမှာ စက်ဘီး အနည်းဆုံး ရှိပြီး နဲနဲ ပိုက်ဆံ ရှိရင် ဆိုင်ကယ် ရှိကြတာ.. မန်းရောက်ရင် ဘယ်ကိုသွားချင်လို့ ဘာကားစီးရမလဲ မေးရင်.. မန်းမှာနေတဲ့လူ တွေတောင် ဘာကားစီးပြီး ဘယ်လိုသွားပါ မပြောတတ်ကြဘူး.. လိုင်းကားဆိုတာ.. တွေ့တဲ့ နေရာ တားစီးရတာတော့ သိပါတယ်။ ဆင်းချင်တဲ့ အိမ်ရှေ့ ရပ်ခိုင်းပြီး ဆင်းလို့ရတာလည်း သိပါ၏။
လုပ်သလို မဖြစ်ရင် ဖြစ်သလို လုပ်ရတာဘဲ.. လူဆိုတာ ဘာမှ မလုပ်တတ်ရင်တောင် ကိုယ့်အတွက် ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းကိုတော့ သိသင့်တယ်လေ.. အိတ်ထဲမှာ ဆောင်ထားတဲ့ အပ်တို ထုတ်ပြီး ထိုးဖို့က ကားကျပ်နေလို့ လက်တောင် လှူပ်ဖို့ မလွယ်ရင်.. အဲဒီ အပ်တို ရှာရတာနဲ့ အချိန်လင့်သွားမယ်.. အဆင်သင့် စီးထားတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ အပြတ်အသတ်နင်းချလိုက်တော့.. တချက်တည်း အေးရောပေါ့..
အီးတုံးလေး ပြောတဲ့ စကားကိုလည်း သဘောကျတယ်.. လောကမှာ အရာအားလုံးကို ကြောက်နေဖို့ မလိုဘူး.. မကြောက်သင့်တဲ့ အရာကို ကြောက်ဖို့ကို မလိုတာ..
ရဲရင့်တာနဲ့ မိုက်ရူးရဲတာ မတူတဲ့ အတွက်.. ဒီပိုစ်ကို ဖတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး အကြံပေး လက်ဆောင် အဖြစ် ကွန်မန်းပေးထားခဲ့တာပါ။
တခါတုန်းက မထသ၅၀ စီးပီးဂန္ဒီမှတ်တိုင်ကနေတာမွေပြန်တာ ဘေးနားထိုင်တဲ့ကောင်က ရှေခုံကကောင်မလေးကို ကျောမှီနဲ့ဖင်ထိုင်ကြားလွတ်နေတဲ့နေရာနားကနေ လက်နဲ့ကလိနေတယ် ကျနော်လဲတခြားခုံပြောင်းထိုင်လိုက်တယ် မြင်ရတာဒေါသကထွက်နေပီ ကောင်မလေးကိုနေရာပြောင်းခိုင်းဖို့ကြံစည်နေတုန်းမှာပဲ ကောင်မလေးကရုတ်တရက်ထပီးသူ့ နေရာကိုပြန်ကြည့်တယ် ဟိုကောင်လက်ကတန်းလန်းကြီးမိသွားတယ် ဘာမှပြန်မပြောဘူးနော် လက်ထဲက၂ဆင့်ချိုင့်နဲ့မျက်နှာကြီးကို ဖြတ်ရိုက်ထဲ့လိုက်တာ အသံကြားရတဲ့ကျနော်တောင် တော်တော်လေးလန့်သွားတယ် အဲဒါမျိုးကျနော်အားပေးတယ် ပြန်ပြောမနေနဲ့လူကြားတယ် အရင်သာကျွေးထဲ့လိုက် ရှင်းစရာရှိတာနောက်မှရှင်း မကောင်းဘူးလားဗျာ~~